သက်ဝေ: နောင်လာမယ့် အနှစ် နှစ်ဆယ်
Posted by သက်ဝေ at 12:40 PM
i wish what you wrote !
I wrote yesterday .:D
but my new house has no inter net yet.
WWKM June 10, 2009 at 3:19 PM
မမရဲ့နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ ပို့စ်လေးကို လာဖတ်သွား
Anonymous June 10, 2009 at 4:13 PM
အမသက်ဝေ ဆုတောင်းကျောက်စာလေး လာဖတ်သွားတယ်ခင်ဗျ :P
အမပန်ကြီး ကိုတဂ်ပေးတာ ကျေးဇူးဗျာ ငြိမ်နေတာကြာပြီလေ..
sonata-cantata June 10, 2009 at 4:30 PM
သက်ဝေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေအုံးမည် ဆိုပါက…
pandora June 10, 2009 at 8:29 PM
ဒန်ပေါက် ချက်ကျွေးမှ ရေးမယ်။ ဒါပဲ။
Rita June 10, 2009 at 8:34 PM
အစ်မ တောင်းတဲ့ဆုတွေ ပြည့်ပါစေ
khin oo may June 10, 2009 at 8:51 PM
khin oo may June 10, 2009 at 8:52 PM
ဖတ်သွားတယ။် သက်ဝေ။ ဟုတ်တယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ရှိမရှိမသေချာတော့တာဘဲ။ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဝေ ပြောသလိုဖြစ်ချင်မိသေးတယ။် (အိယောင်ဝါးလုပ်သွားသည်။ )
Moe Cho Thinn June 11, 2009 at 1:19 AM
အတူတူ ဆုတောင်းသွားတယ် မမသက်ဝေ။
ပြီးတော့ ဆုတောင်းလဲ ပြည့်စေချင်မိတယ်။
Hmoo June 11, 2009 at 5:24 AM
Good..Ma Thet Wai..Beautiful..well wishing 4..
2029..we hope..Freedom..Fair and Equality..
But U left about ur Grand kids
I guess..they also almost teenage..
if they interesting..where U wanna4their edu..?
Who can B only one country..spend the money4research& teq....?...interesting..
4 me..!! ur post is enough..
Umm.. more than enough..par..
B cause..I'm single....(Advertising )
တန်ခူး June 11, 2009 at 6:30 AM
သက်ဝေရေ… ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ပါပဲ… တန်ခူးကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တတ်နိုင်သမျှရေးပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် သက်ဝေအနှစ်နှစ်ဆယ်လေးက ထုံးစံအတိုင်း စုစုစည်းစည်းနဲ့ဖတ်လို့ အတော်ကောင်းလိုက်တာ… ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်တယ်နော် (သက်ဝေလို လိုက်ပြောကြည့်တာ)…
သက်ဝေတောင်းတဲ့ဆုတွေပြီးပြည့်စုံပြီး ခုကဲ့သို့သက်ဝေရဲ့ ချစ်သောသူုငယ်ချင်းလေး အဖြစ်နဲ့သက်ဝေအနားရှိရပါစေသား…..
myo June 11, 2009 at 10:06 AM
(အဲလို ဆုပေးလိုက်လို့ တကယ်ရသွားရင်ကောင်းမယ်..
You forget to mention urs -- --- and --- in ur post. Just wish parents and relatives.